FNCLM: miaro mafy ny tontolo iainana | NewsMada
FNCLM: miaro mafy ny tontolo iainana
Nanatanteraka ny voly hazo ny Federation nationale des clubs Lions et Léo de Madagascar (FNCLM), ny 9 marsa lasa teo, teny Behenjy, PK 48 amin’ny lalam-pirenena faha-7. Andiany faha-11 izany voly hazo nataon’ny FNCLM izany, niarahan’ny mpikambana sy ny fianakaviana aminy miisa 400, ary ireo mpianatra avy amin’ny EPP Behenjy sy ny manodidina. 3000 ny zana-kazo kesika no novolena tamin’io fotoana io, natrehin’ny teknisianina manokana momba ny ala. Nitarika ny fotoana ny filohan’ny FNCLM, Ranaivo Trivico Pâquerette.
Notsiahivin’ny filohan’ny FNCLM ny adidin’ny olom-pirenena rehetra amin’izany voly hazo izany, indrindra amin’izao mampiakatra ny hafanana izao. Nanamafy izany ny filohan’ny Lions club Taramasoandro, Elie José, nampita tamin’ireo mpianatra fa « ny hazo iankinan’ny fiainantsika, miantoka ny fahatsaran’ny rivotra iainantsika, ary lova ho an’ny taranaka ». Tamin’io fotoana io koa ny nanomezana fankasitrahana ireo mpianatra nahomby tamin’ny fanadinana CEPE. Anisan’ny nozaraina tamin’izy ireo ny fitaovam-pianarana.
Tsara ho fantatra, araka ny fanadihadiana nataon’ny mpikaroka alemaina, fa mahatratra 8,8 tapitrisa ny olona maty isan-taona maneran-tany, noho ny fahalotoan’ny rivotra. 40 hatramin’ny 80 % ny maty « mialoha ny fotoana » vokatry ny aretin’ny taovam-pisefoana. Miampy ny faharavan’ny ala, anisan’ny miteraka aretina ny loto avy amin’ny angovo, ny fitaterana, toy ny iainana eto an-dRenivohitra.